Life Shelf of Spirits
Ukususela kwimbono yekhemisti, kukho iintlobo ezininzi zotywala , kodwa enye inomdla apha yiyophuza ongayiphuzayo, e-alcohol okanye ethanol. Ngokwenene, akukho nhlobo yeentlobo zotywala ezihamba kakubi okanye eziphelelwe yifomu ecocekileyo okanye xa zihlanjululwe ngamanzi. Utywala ngumntu onamandla okubulala i-disinfectant, ngoko-ke xa ukhona kwiqondo eliphezulu, ukhuselekile kwi-mold, fungi, protozoa, kunye ne-bacteria. Kuphela xa utywala udibene kunye nezinye izithako ezinokuphila.
Iintlobo zeTywala ezingazange zihambe zimbi
Ubunxila obunzima buhlala ngonaphakade. Enyanisweni, ezinye iintlobo zotywala, ezifana ne-scotch, zithuthuka ngokudala ukuya kwindawo evulekileyo kuyo. Nayi imimiselo eqhelekileyo yemimoya engenazo i-shelf life:
Nangona kunjalo, xa uphahla iibhotile, i-oksijini evela emoyeni iqala ukutshintsha i-chemistry yezinto ezibhalwe kuyo. Nangona utywala angeke ube ngumngcipheko wokusela, umbala kunye nongcamango kuya kutshintsha. Emva kokuba uvula ibhotile yobunxila obunzima, qiniseka ukuba uyayifakraza ngokukhawuleza ngokusemandleni kwaye ugcine umbane kwisitya kunye neendawo ezincinci zomoya. Oku kuthetha ukuba unokudlulisela utywala kwibhotile encinci njengoko iziqulatho zicinywa. Xa itywina liphukile, iwashi iqala ukukhawuleza. Ukuba uchithekile ukuvula le bhotile yokukhangela umgangatho, umzekelo, uya kufuna ukuwugqiba kwiinyanga ezili-8 ukuya kunyaka ukufumana amava amahle.
Iintlobo zoTywala ezine-Shelf Life
Xa ezinye izithako zongezwa utywala okanye utywala utyiswa, umkhiqizo unokufumana i-skunky okanye uxhasa ukukhula kwemvubelo, isikhunta kunye nezinye izilwanyana ezingenakusihlwa. Ezi mveliso zinomhla wokuphelelwa yisikhathi ekugxininiswe kuzo. Bahlala behlala ixesha elide xa befriji.
iziphuzo ezixutywayo (mhlawumbi zipakishwe okanye zenziwe ngokwakho)
Ubhiya bunobomi obunobumba bekhefu. Oku kuya kugxininiswa kwisithintelo kwaye ihluka ngohlobo lwenkcenkceshe yobhiya.
Iilkiqueurs zamaCream ziqukethe iimveliso zobisi kunye namaqanda ngamanye amaxesha. Ezi mveliso zihlala zingekho ngaphezu konyaka ukuya kwisiqingatha. Uyakwazi ukunambitha ukuba abone kakuhle okanye udlala ngokukhuselekileyo kwaye uzilahle ngaphandle ukuba zikhangele okanye zivumba ikhefu okanye zigqithise umhla wazo wokuphela.
Ngeziphuzo ezixubekileyo, qwalasela isiphuzo 'esibi' xa usudlulile ubomi beshefu kwisithako esincinci. Umzekelo, ngelixa i-vodka echanekileyo ingaba yinhle ngonaphakade, xa uxubusha kunye nejusi le-orange, mhlawumbi ungafuni ukuwasela it left on counter today. Kungenzeka ukuba kubekho iintsuku ezimbalwa ezifrijiweyo. Akunjalo okokuba isiselo sinoba yingozi, kodwa ingcamango ingaba yinto engathandekiyo. Emva kwexesha elithile, ukubunjwa kunye nezinye izinto ezimbi ziza kukhula kulezi ziphuzo, zibenza zingaphephekanga ngaphezu kokugqithisileyo.
Utywala O no kuhamba
Ngexa iwayini ikhula xa ibhotile kwaye ihlala ingapheliyo, ukuba itywina yebhotile ibonakaliswe, ingaba yingozi. Oku kuhambelani ne-liqueur, ezingayi kukhula izifo zengqondo nokuba i-bhotile ivulekile.
Nangona kunjalo, kuyo nayiphi na imeko, ukuba imveliso ibonakaliswe emoyeni, imichiza yenguqu yenguqu (ubunqabileyo ibe yinto engcono) kunye notywala kunokuphuphuma ngaphandle kwamanzi.
I-Liqueurs kunye ne-cordials ziqulethe i-sugar and other ingredients. Akukho miselo onzima kunye ngokukhawuleza ngokubhekiselele kwi-shelf yobomi, kodwa xa ubona ushukela okhanda kwi-liquid okanye ukunambitheka okanye umbala ukhangeleka ', ungafuni ukusela.
Ukwandisa Ubomi beShelf yoTywala
Ungagcina utywala kwifom ephezulu ngokuthi:
Ukuyigcina kwindawo epholile, eyomileyo. Le ndawo iyahluka. Kungaba yipilasitiki okanye i-rack elawulwa yimozulu yewayini, ngelixa unako ukugcina i-vodka efrijini.
Gwema ukutyhila nayiphi na utswala utshintsho olukhawuleza okanye olubi kakhulu.
Yigcine ilanga ngqo.
Gcina utshwala kwibhotile nge-airspace encinane.
Yenza ethile itywina kwisibambiso ilungile. Ungagcini utywala kwiingxowa ezingavaliweyo okanye i-decanters ngaphandle kokuba ucwangcise ukungena kwi-container ngokukhawuleza.
Utywala obuchanekileyo buhlala ngonaphakade. Emva kokuba ungeze izithako kotywala, kunokuhamba kakubi. Ukuba isiselo sibheka okanye sithanda umdlalo, mhlawumbi kungcono ukuyilahle. Ubungqina obuphezulu bokusela utywala angeke kube yingozi ukusela, kodwa xa isitywina sobungqina bobuncitshana obuphantsi siphukile, umoya ungena kwibhotile, ukuxinwa kwe-alcohol alcohol, kunye nezifo ezigugu ezingenza ugula lande.
Indlela yokuLawula utywala
Yintoni Ukwahlukana Phakathi koTywala kunye ne-Ethanol?
Iimpawu eziHomeleleyo zeeMveliso
Indlela iPopcorn Pops ngayo
'Umdlalo Omkhulu kunabo Bonke Udlale' Utshela i-Underdog Famous Story Indaba
I-Doo-Wop Boy Boy Band: UFrankie Lymon kunye nabaselula
I-Recipe yeSlime: Indlela yokwenza i-Fake Snot
I-Mawangdui: I-Han Dynasty Tombs of Lady Lady kunye noNyana wakhe